မိန်းကလေးတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကခံစားချက်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အမျိုးသမီးတစ်ဦးဒါမှမဟုတျပါဘူး။ သောအချိန်လွန်သွားနှင့်သူမနေသောကြောင့်သင်တို့ကိုသူမ၏စိတ်ချလို့ယူဆတယ်ခဲ့ကြသည်အရာကိုမေ့လျော့ခဲ့သောကြောင့်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုအဘို့အစောင့်ပါ။
သငျသညျသူမ၏ဘက်မှာဖြစ်ဖို့ရှိသည်, ဒါကြောင့်သူမစားကြောင်းအားလုံးပြောပြရန်အခွင့်အလမ်း, ကပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်, တစ်ဦးကိုခစျြတစျခု vooyusche သည်ကောင်းရှိလိမ့်မည်ဆိုပါက,
သင်တို့ရှိသမျှ ... သင်တို့သည်ငါ့ကိုပေးပါ! ..
Oh yes သူမ၏ဘာမှ navreno! မျက်ရည်ကိုကျဆင်းအရာကိုကြသောကြောင့်? စသည်တို့ကိုသူမကအရှိဆုံး, အသိဉာဏ်ဆင်းလှသောအစ်မ, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်, ငါ့ကိုပြောပြပါ .. အမြိုးသမီးမြားနားကိုခစျြ
[အီးမေးလျ protected] - စီးပွားရေးသည်လောင်နေသည်
မိန်းကလေးတစ် ဦး စီသည်တစ် ဦး ချင်းချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သည်။ သင်စိတ်ပညာကိုသင်လေ့လာခဲ့ပါကအမျိုးသမီးစိတ်သည်သိသိသာသာသိသာသောအချက်များစာရင်းမှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ရမည်။ (သင်စိတ်ပညာလေ့လာပြီးနောက်သင်ဘယ်အချက်တွေကိုအတိအကျသိသင့်သည်ထင်သည်) ။ ဒါကြောင့်မနေ့ကလုံးဝအန္တရာယ်ကင်းတဲ့စကားစုကသူမကိုဒီနေ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနာကျင်စေနိုင်ပါတယ် .... အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြေများသည်အဖြေများပေးသောဥပမာအားလုံးသည်မိန်းကလေးသည်သင်၏ရည်းစား၊ သတို့သမီးနှင့်အခြားသူများဖြစ်သင့်သည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင်သာအခြေခံသည်။ သို့သော်သင်ကြုံတွေ့ရမည့်အရာမရှိသောမည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မဆိုကြာမြင့်စွာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်လော။ ! ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်အဘယ်သို့ပြုရမည်, သူမအခွအေနေအဘို့အအကြောင်းပြချက်ရှာတွေ့မှအများဆုံးမှန်ကန်သောဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သေချာစွာအလုံအလောက်ဤသို့ပြု, အလွန်အကျွံဝေဖန်မှုများနှင့်ရိုင်းစိုင်းခွင့်ပြုရန်မကြိုးစား, သင်ပြproblemနာကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်ဟန်လျှင်ပင်စကားပြောဆိုမှုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်မိန်းကလေးပုံပြင်၏အစားအစားပြသ မင်းဆီကိုရန်လိုခြင်းသို့မဟုတ်ငိုခြင်းစသည်တို့ကိုသင်ကြားနေခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုသို့သွားခြင်းဖြင့်သူမကိုစိတ်အေးအေးထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ အရာရာတိုင်းတကယ်ဆိုးနေလျှင်သက်သေပြနိုင်သောဆေးတစ်လက်တစ်ခုရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားပါ။ စားသည်။ .... ထိုသို့သောတုံ့ပြန်မှုများကစေတနာစိတ်ပျက်ခံရဖို့ကြိုးစားကြည့်နှင့်၎င်း၏ ekspresivnuyu မ rastroennyh ငါ့နှလုံးအတွက်အကူအညီလိုခဲ့ရှိသမျှနှင့်အတူသင်ကြည့်ရှုခြင်း, သေးအားလုံးတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်များမှာ
အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်မကြာခဏဘာသာရပ်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို (အမျိုးသမီးတွေ) switching ဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ်, ကောင်းသောသို့မဟုတ်ခက်ခဲနေ့ကနှင့်တူ၏ရှိမရှိ, သင်ခံစားရပုံကိုမမေးဘူးပါလိမ့်မယ်, သူမ၏ကသူ့ပြဿနာအကြောင်းကိုခဏမေ့လျော့စေရန်ကူညီပေးသည် ... ဒါပေမယ့်စိတ်ပညာတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရာဖြစ်ပါသည်, ပုံမှန်အားဖြင့် Non-နှုတ်ဆက်သွယ်ရေး, ထိုတင်ပါတယ်၏စကားသံအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲမပုအမြင်နှင့်အသိပညာမရှိ sensitivity ကိုလည်းမရှိ (ဒါကြောင့်အပေါ်အမူအရာ, မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့။ ), တစ်ခါတစ်ရံရိုးရှင်းစွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
Remnm! ခြေပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တက်မောင်းသွားသင့်တယ်, လောကီသားသည်အလွန်ပျော့ပျောင်းဖြစ်လာသည်နေရာမှသိနှင့် ochega leshit ဆိုလိုသည်မှာကားတစ်စီးမှာဖြစ်သင့်, သာမီးဖိုချောင်အတွက်ဖြစ်ဖို့နဲ့ pastel အလုပ်လုပ်မဖြစ်သင့်တဲ့သင်ခန်းစာသင်ပေး
Posted in, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,337 စက္ကန့်ကျော် Generate ။